Ulwazi lwezokwelapha > I-2-Chloro-5-methylpyrimidine: I-CAS (Ama-Chemical Abstracts Services) Inombolo Yokubhalisa 22536-61-4
Izakhiwo zomzimba nezamaCycliki I-2-Chloro-5-methylpyrimidine
I-2- I-Chloro-5 i-methylpyrimidine ine-powder ephuzi ekhanyayo ebonakalayo ekamelweni lokushisa. Abanye bangachaza umthunzi wombala njengemhlophe. Akunamakha nobunzima bama-128.56 amagremu ngayinye. I-formula yayo yamakhemikhali ibonakala njenge-C5H5CIN2 ne-Simplified Molecular - Input Line Entry System (SMILES) njenge-CC1 = CN = C (CL) N = C1. I-compound inomqondo wokuqhafaza ophakathi kwe-89-92 degrees centigrade, nephuzu le-239 .Ama-degree angu-2 ku-750mm / hg. I-solid is soluble kancane emanzini. Ijwayele ukukhiqizwa futhi ithengiswe njengendlela ephakathi kwemithi kanye nesisindo esiphakathi (ukuhlanzeka) phakathi kwe-97% no-98%, okuphansi kunqatshelwe njenge-95%. Ubuningi bomunyu owodwa we-2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4) cishe ama-1.169 amagremu ngayinye imvukuzane ku-25 degrees centigrade. I-enthalpy ye-vaporization yi-45.68 KJ / mol futhi umfutho we-vapor ulinganiselwa cishe ku-0.0626 mmHg ku-25 degrees Celsius. Ama-synonyms avamile asetshenziselwa i-2-chloro-5-methylprimidine yi-Pyrimidine, i-2-Chloro-5-methylpyrimidine, i-2-chloro-5-methyl- (8Cl, i-9Cl) ne-5-methyl-2- chloropyrimidine.
Ukulungiselela i-2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4)
I-2- chloro-5 methylpyrimidine ingahle isetshenziswe ngokusebenzisa izindlela eziningi. Umkhuba ojwayelekile wokulungiselela uhlose ukuwufumana njenge-25% yomkhiqizo ophumela ekuphenduleni phakathi kwe-phosphorus oxychloride ne-3-methylpyridine 1-oxide. Kodwa-ke, ukuthola isivuno esiphezulu nakakhulu, i-2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4) ingalungiswa ngokuphendula i-phosphorus oxchloride ne-3-methylpyridine 1-Oxide. Ukuthuthukiswa kuhilela ukufeza ukusabela nge-basic nitrogen engxenyeni yezinto eziphilayo kanye ne-diluent (mhlawumbe i-solvent e-organic egcwele) konke okwenziwe ebangeni lokushisa phakathi kwe-50 degrees no-50 degrees Celsius. Izithelo ngisho nase-70% zingatholakala ngezindlela ezahlukene. Ukukhiqizwa kwezinto ezingaphezu kuka-96% kuye kwabhalwa futhi, nakuba lezi zinkinga zifakazela ukuthi kunzima kakhulu ukudlula, okwenza ukwenziwa, ikakhulukazi ngesilinganiso esikhulu esiseduze. Ukukhetha indlela yokulungiselela ekhethiwe kungathinteka inani elifuna ukukhiqiza futhi likwazi ukuhlukanisa kwezinye izinto ngemikhiqizo. Noma kunjalo, kuye ngokuthi usebenzise kakhulu umkhiqizo, ungakwazi njalo ukuthola inqubo esetshenziselwa ukulungiselela, noma ukhethe indlela efanele ongathanda ukuyisebenzisa uma ulungiselela ukulungiselela wena.
Yini ngempela i-Pyramidine?
Ngamane nje, ziyizinhlanganisela ezinamakha ama-athomu e-Carbon nama-nitrojeni enendandeni eyisithupha. Indandatho ihlelekile kahle. Izidakamizwa ze-Pyramidine, zinde isikhathi eside manje zidlala indima ebalulekile ekuthuthukiseni izidakamizwa ziba zodwa noma ngokuzihlanganisa nezinye izinhlanganisela. Sezisetshenzisiwe, futhi ziyaqhubeka zisetshenziselwa izidakamizwa eziningi ezibandakanya, kodwa ezingagcini, izidakamizwa zokwelapha umfutho wegazi ophezulu, imishanguzo yokulwa nesifo sofuba, izifo zokubulala izifo ezivamile, izidakamizwa eziphikisana ne-malaria ngisho nokusetshenziswa kwezidakamizwa ze-HIV . Ukugxila kwethu kulesi sihloko ku-2-chloro-5 methylpyramidine futhi isebenzise njengesikhashana
Ukusetshenziswa kanye nezinhlelo zokusebenza 2- Chloro-5- methylpyramidine
Kuvame ukusetshenziselwa ukuhlanganiswa okuphilayo; evame ukusetshenziswa njenge-pesticide ephakathi ne-acetamiprid, i-imidacloprid, njenge-herbicide kanye ne-bactericide. Ibuye isetshenziswe njengemithi ephakathi kwemithi, i-agent eshukumisayo kanye ne-petrochemical additive. I-2- I-Chloro-5- methylpyramidine isetshenziswe ekwenzeni izinhlanganisela ezintsha ze-neonicotinoid ezinomsebenzi wokubulala izinambuzane. Okunye okusetshenziselwa ukuhlanganiswa komkhiqizo we-Agro kuhlanganisa nokwenziwa kwe: Imidacloprid, Acetamiprid, Nitenpyram, NTN32693. Lezi zindlela eziqinisekisiwe zisebenza ezindaweni zombili zokuhlala nezimboni ukuze zibhubhise izinambuzane ezinobungozi ezitshalweni zezithelo, zemifino noma okusanhlamvu.
Ezinye izinhlanganisela zamakhemikhali ukuthi i-2-Chloro-5 methylpyramidine engasetshenziselwa ukuyenza ihlanganisa:
I-2-Chloro-5 i-methylpyramidine iyaziwa ukuthi isimemezelo emakhemikhali lapho igcinwa ngaphansi kwezimo eziphakanyisiwe: Ekushiseni kwegumbi. Ungazami ukusebenzisa i-aluminium noma iziqukathi ezinamathelisi, njengoba i-compound izosabela ngalezi zinto ukukhiqiza igesi le-hydrogen engakwazi ukudala ingxube yokuqhuma emoyeni. Qinisekisa ukuthi uhlola iziqukathi njalo ukuthola futhi ujwayele noma yikuphi ukuchitha noma ukuvuza ekuqaleni.
Ngenxa yokuzinza kwayo nokungenabungozi, i-2- chloro-5-methylpyramidine ingathuthwa ngomoya noma ulwandle. Isebenza kahle kakhulu nge-hydrogen oxides, i-carbon oxides, ne-nitrogen oxides, ngakho-ke kunconywa ukuba ukhethe ukuthutha noma ukukhethwa kokugcina ngaphandle kokuvezwa kunoma iyiphi yalezi zinhlanganisela. Iziqukathi kufanele zigcinwe zivalwe ngokuqinile, endaweni epholile futhi enomoya omuhle
Ukusingatha okufanele, Ukuqapha ukuphepha, Ukulahla kanye nezinyathelo zokulwa nomlilo
Njalo ugqoke izimoto ezivikelayo njengezigulane ezinamakhemikhali nezokuphepha lapho usebenzisana nazo I-2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4) ukugwema ukuxhumana noma amehlo noma isikhumba. Gwema ukuvula imfucuza, umshini noma igesi: Yisebenzise ngaso sonke isikhathi isikhala esimnandi. Ukuphulukiswa okuqhubekayo kuye kwafakazelwa ukuthi kunemiphumela emibi yezempilo. Njengalokhu njalo, zama ukuqhuba kahle ukuhlanzeka kwezimboni nokuphepha.
Noma kunjalo, Uma kwenzeka ukugwinya ngengozi: Hlanza umlomo ngamanzi uphinde uthintane nodokotela. Endabeni yokuphuza amanzi: Hambisa abantu abathintekayo emoyeni omusha futhi uma bengaphefumuli, qhubeka nokuphatha ukuphefumulela okufakelwayo, futhi uxoxe nodokotela. Ukuze uthintane ngesikhumba ngengozi, hlanza indawo ethintekile kahle ngesipho namanzi okungenani imizuzu eyishumi nanhlanu bese ususa noma yikuphi ukugqoka noma izicathulo ezingcolile. I-2- chloro-5- methylpyrimidine ingashisa isikhumba noma ibangele ukuzwela. Qhubeka ukuxhumana nodokotela.
I-2- chloro-5- methyl pyrimidine kufanele ilahlwe njengemfucuza ekhethekile. Lokhu kusho ukuthi amalungiselelo akhethekile kufanele abekwe, esebenzisa inkampani yokulahlwa kwelayisensi ngokuxhumana nendawo yakho yokulahlwa kwemfucuza yasendaweni ukuqinisekisa ukuhambisana nomthetho kazwelonke nangokwesifunda. I-compound akufanele ikhishwe ku-drain, futhi uma kwenzeka i-spill yesihlahla, i-vermiculite ibe isitsha esivaliwe futhi uchithe ngendlela efanele.
Ukucima umlilo ngenxa ye-2-Chloro-I-5-methylpyrimidine (i-22536-61-4) ukushisa komunye umuntu kungasebenzisa izicima umlilo ezibomile, i-Carbon (IV) i-oxide, isikhumba se-polymer noma izicima-mlilo ezivimbela utshwala. Uma kunesidingo, umuntu kufanele agqoke imishini yokulwa nomlilo kanye nezixhobo zokuphefumula ukunciphisa ingozi yokushisa.
Ngokuphathelene nemikhawulo yokunciphisa emsebenzini, i-2- chloro-5-methylpyramid ayinakho ukulinganiselwa okubekwa khona. Ukuqapha okujwayelekile njengamakhemikhali amakhemikhali amakhemikhali kunconywa ngesikhathi sokuphatha.
Olandelayo Post Next: Konke okudingeka ukwazi nge-spiro compounds